Jeff Weiner - Maareyn naxariis leh
Jeff Weiner, Agaasimaha Guud ee LinkedIn, wuxuu ka hadlayaa dhiirigelinta ka dambeysa qaabkiisa naxariista leh. Wuxuu sheegaa sida khibradihiisii ​​hore u qaabeeyeen dhaqankiisa xirfadeed ee hadda jira. Wuxuu qeexayaa sida uu si tartiib tartiib ah u gartay qaabab maareyn wax ku ool ah oo aan waxtar lahayn, iyo sida uu hamigiisa hagaajinta ugu gogol xaadhay is-beddelka iyo isbeddelka. Kadib, waxay soo bandhigeysaa faa'iidooyinka dhaqanka tixgelinta, oo ay kujirto joojinta khilaafaadka iyo kordhinta wax soo saarka. Wuxuu sidoo kale ka hadlayaa tababarka iyo ka faa'iideysiga xoogga shaqaalaha.
Jeff Weiner - Maareyn naxariis leh Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Ku taageer ardaydaada hanuuninta iyadoo ay ugu wacan tahay MOOCs
socdaHorumari caqligaaga shucuurta
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah Kooxaha
Ku noolaanshaha iyo helitaanka shaqo ee Faransiiska
Cudurada Faafa ee Biyaha ka dhasha
Caqabada Emilie: inay ku laabato jacaylkeedii ugu horeeyay 8 bilood ilaa maalinta